Gunjan FM 105.3 सम्बृद्ध नगर बनाउने योजनाका साथ अघि बढेका छौ, नगर प्रमुख यादब
रौतहटमा १६ नगरपालिका र २ गाउँपालिका रहेको छ, । जप्रतिनिधि चयन भएसंगै उनीहरुले आफनो कार्यकाल लाई नगरक्षेत्रमा कस्तो बिकास योजना दिदै छन । जनताको जीबनस्तर संग जोडिएका बिषय र सम्बृद्ध नगरको योजना लाई लिएर वृन्दावन नगरपालिकाका प्रमु्ख रामस्नेही राय यादबको बिचार लिएका छौ ।
 नगरको समग्र विकासका लागि तपाईंका योजना केके छन् ?
 नगर विकासका लागि गाविस हुँदादेखिकै योजनाहरू छन् । सविकका ५ ओटा गाविस रहेको यस नगरपालिका विकासको दृष्टिकोणले पछाडि परेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, सडकलगायतका योजनामा यस नगरपालिका पछाडि रहेकाले यसलाई नै प्राथमिकता दिएका छौं । भौतिक पूर्वाधारतर्फ पनि समस्या रहेकाले योजनामा समावेश गरिएको छ । यस नगरपालिकाको प्राथमिकताको योजना भनेकै विकासका पूर्वाधार हुन् । साविकका गाविसमा रहँदै आएका जनतालाई नगरवासीको अनुभूति दिन यी योजनाहरू महत्वाकाङ्क्षी हुनेछ । नगरवासी जनताका चाहनाअनुसारकै योजना रहेकाले पूरा गर्न प्रयास गर्नेछौं ।
 यी योजनामध्ये प्राथमिकताका योजनाहरू केके हुन् ?
 यी योजनामध्ये विशेष प्राथमिकता शिक्षा हो । विद्यालय बाहिर रहेकालाई विद्यालय पढाउन पठाउने वातावरण सृजना गर्छौं । विपन्न, दलित, जनजाति र पिछडिएका वर्गलाई विद्यालयको पहुँचमा पुर्याजउनु नै पहिलो प्राथमिकता छ । दोस्रोमा स्वास्थ्य पर्छ । स्वास्थ्य बीमादेखि स्वास्थ्यचौकीको स्तरीकरण गर्नेलगायत स्वास्थ्य संस्थामा पुगेका बिरामीलाई सहज र सरल सेवासुविधा दिनेतर्फ नगरपालिकाले ध्यान दिएको छ । तेस्रोमा खानेपानी तथा सरसफाइलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । यस नगरपालिकामा रहेका सडकहरू जीर्ण रहेकाले स्तरोन्नतिको योजना बनाएका छौं ।
 यी योजना सम्पन्न गर्न नगरपालिकालाई कति बजेटको आवश्यकता पर्छ र त्यसका स्रोतहरू केके हुन् ?
 नगरपालिकाले ५ वर्षको योजना लिएर अघि बढेको छ । पञ्चवर्षीय योजनासमेत सार्वजनिक भएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि करीब ११ करोडको बजेट अनुमान गरिएको छ । नगरको विकास योजना पूरा गर्ने सो रकम अनुमानित हो । तर, आन्तरिक स्रोत पनि छन् । बाग्मती र चाँदी नदी तथा राष्ट्रिय वनसमेत यसै नगरपालिकाअन्तर्गत पर्ने हुँदा नगरका स्रोतहरू प्रशस्तै छन् । यसमा नेपाल सरकारको अनुदानबाट आएको करीब २३ लाख रकम व्यवस्थापन गरिनेछ । नदीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी निकासीबाट पनि यस नगरले उल्लेखनीय कर सङ्कलन गर्नेछ ।
 अहिले स्थानीय तहले स्थानीय सरकारको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, यो भूमिकालाई प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्न केके चुनौती देख्नुहुन्छ ?
 स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि मात्र यस क्षेत्रका बासिन्दाले नगरपालिका भएको अनुभूति गरेका छन् । तर, नगरपालिकाको भौतिक संरचनाको भने अभाव छ । यसका कारण कार्यसम्पादनमा समस्या छ । नगरपालिकाको मुख्य चुनौती भनेको नक्साङ्कन नै देखिएको छ । यसअघि गाविस हुँदा जथाभावी रूपमा घर बनाउने गरेको भए पनि अहिले नगरभित्र घर बनाउँदा अनिवार्य रूपमा नक्सापास गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यसका लागि नगरपालिकामा इञ्जिनीयर, ओभरसियर र अमिनको अभाव छ । जनप्रतिनिधि निर्वा्चित भएर नगरपालिकामा आए पनि कर्मचारीको अभाव छ । त्यसलगतै प्रतिनिधि तथा प्रदेशको निर्वाचन भएको र त्यो सम्पन्न हुनासाथ फेरि नगरपरिषद्मा जुटेका कारण विभिन्न समस्या र चुनौती छन् । वैशाख मसान्तभित्रमा नै नगरपालिकाका योजनाहरू सम्पन्न गराउन लक्ष्य लिएकाले यसमा चुनौती पनि छ । गाविस र नगरपालिका हुँदा दिइने सेवासुविधामा नै फरक छ र त्यो जनतामाझ स्पष्ट नहुँदा समस्या र चुनौतीको रूपमा देखिएको छ ।
 स्थानीय तहमा राजनीतिक दलहरूलाई विकासको मुद्दामा सहभागी बनाउन तपाईंको भूमिका के हुन्छ ?
 राजनीतिक दलमा आबद्ध भएका कारण नै स्थानीय तहमा निर्वा्चित भएकाले राजनीतिक दललाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । विकासका मुद्दामा उनीहरूको पनि आवश्यकता पर्ने भएकाले सरसल्लाह गरेर अगाडि बढ्नु नै उपयुक्त हुन्छ । केन्द्रीय र प्रदेशको बजेटमा नै स्थानीय तह निर्भर रहने गर्छ । त्यसकारण यस नगरभित्र रहेका राजनीतिक दलका पार्टी प्रतिनिधिले केन्द्रीय र प्रदेशको बजेट नगरमा ल्याउन सहयोगको गर्नुहुने अपेक्षा छ । समग्र नगर विकासमा राजनीतिक दलको भूमिका प्रशंसनीय हुने विश्वास लिएको छु ।
 तपाईंको नगरलाई अन्यभन्दा फरकरूपमा विकास गर्न नगरमा भएका सम्भावनाका क्षेत्रहरू केके हुन् ?
 यस जिल्लामा १६ ओटा नगरपालिका र २ ओटा गाउँपालिका छन्, जसमध्ये एक नगरपालिका वृन्दावन पनि हो । यस नगरपालिकालाई अन्यको तुलनामा फरक बनाउन धेरै स्रोत र साधनहरू छन् । विशेष गरी वनजङ्गल र बाग्मती नदीलाई नै संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न सकेमा पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । यस्ता पर्यटकीय सम्भावनाका स्थानहरू यस नगरपालिकाभित्र धेरै छन् । त्यस्ता स्थानको पहिचान गरी विकास गर्दै लैजाने योजनामा नगरपालिका छ । यसले नगरपालिकाको सौन्दर्य बढाउनुका साथै आन्तरिक आयमा समेत वृद्धि हुन्छ ।
 लामो समयदेखि स्थानीय निकाय कर्मचारीले सञ्चालन गर्दै आएकोमा हाल जनप्रतिनिधि निर्वा्चित भएर आउँदा काम गर्न कर्मचारीसँग समन्वयको समस्या छ कि छैन ?
 विगत लामो समयदेखि स्थानीय तहको निर्वाचन नभएकाले कतिपय कर्मचारी पनि अन्योलमा छन् । तर, विस्तारै उनीहरूले जनप्रतिनिधिसँग गर्ने व्यवहार र कार्यको बारेमा थाहा पाउन थालेका छन् । जनप्रतिनिधिसँग गर्ने कार्यको अनुभव कर्मचारीमा हुँदै गएकाले यस नगरपालिकामा जनप्रनिधि र कर्मचारीबीचको समन्वय राम्रो छ । समन्वयमा समस्या हुँदैन । यद्यपि, समस्या भएमा त्यसको समाधान गर्दै नगरवासीको हितमा नै कार्य हुनेछ । नगरवासीको विकासमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधि दुवैले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।